गण्डकीमा २१२ नयाँ संक्रमित, पोखराका १४४ - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
गण्डकीमा २१२ नयाँ संक्रमित, पोखराका १४४
सफल न्युज द्वारा २०७८ बैशाख २१ गते मंगलवार १३:३७ मा प्रकाशित
पोखरा, बैशाख २१ गते ।गण्डकीमा मंगलबार दिउसोसम्म २१२ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पोखराका विभिन्न अस्पतालमा गरिएको स्वाब परिक्षणमा २१२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ । निर्देशनालयले जारी गरेका तीन विज्ञप्ति अनुसार थपिएका मध्य १४४ जना पोखरा महानगरपालिकाका रहेका छन् । त्यस्तै ५१ जना नवपलपरासीपूर्वका रहेका छन् । तनहुँका ११ जना, स्याङजाका ४ जना, बाग्लुङ र लमजुङका एकएक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
त्यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । म्याग्दीका पुरुषको पोखराको चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका वडा नं ६ का ७६ वर्षका एक पुरुषको मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
मृतक पुरुषमा यही वैशाख १७ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो । डा शर्माका अनुसार यो सहित म्याग्दीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म पाँच पुगेको छ । म्याग्दीमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ७१ जना रहेको छ ।
म्याग्दीमा ३४९ जना संक्रमित भएकोमा २७४ जना निको हुुनुभएको छ । कोरोना संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिएपछि म्याग्दीमा १० दिन कडा लकडाउन गरिएको छ । कोरोना संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म २३३ जनाको पुगेको छ ।